အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမော်ကွန်းတိုက် - စာမျက်နှာ2of 390 - Teles Relay
Ogossagou အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှု: IBK သည်ရာဇ ၀ တ်မှု၏ကမကထပြုသူများကိုသိသည်၊ သို့သော်ဘာကိုစောင့်ဆိုင်းနေသနည်း။
À l’instar de Koulogon, Sobane Da,…, l’attaque d’Ogossagou est l’une des terribles et horribles crimes contre l’humanité ayant marqué le peuple malien et le monde tout entier. L’attaque du 14 février 2020 sonne comme une hantise que le…
Maroc : Atterrissage d’urgence d’un avion de Royal Air Maroc
© Copyright : DR 24 février 2020 - 09h00 - Société Deux avions, dont un appartenant à Royal air Maroc (RAM), ont dû se dérouter en cours de vol, dimanche 23 février à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, à cause d’un malaise de passagers.…
အိန္ဒိယ - သေလွန်သောအမွေအနှစ်နေရာ ၅ ခုသည်အသက်ကယ်ရန်မျှော်လင့်သည်
Dans les villages de l'Haryana, des tas de crottes de fumier séchant dans les fermes sont monnaie courante - même sur des terres protégées qui comptent parmi les plus grands sites de la vallée de l'Indus. À Rakhigarhi à Hisar,…
ဆွစ်ဇလန် - ဆွစ်ဇာလန်သည် Crans-Montana တွင်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်
"ဒီတနင်္ဂနွေဟာဆွစ်ဇာလန်နှင်းလျှောစီးအတွက်ဒီမယုံနိုင်စရာရာသီအတွက်ပန်းတိုင်တစ်ခုရရှိခဲ့ပါပြီ" Urs Lehmann သည်သူ၏အဖွဲ့ကိုအလွန်ဂုဏ်ယူသည့် Swiss-Ski ၏ဥက္ကဌဖြစ်သည်။ Crans-Montana တွင်သူ၏“ ဆင်းသက်လာသူများ” သည်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။
ဘယ်လ်ဂျီယံ - ရုံးမှာနေမကောင်းဖြစ်အောင်ဘယ်လိုရှောင်ရမလဲ။
ရုံးမှာဖျားနာတာကိုဘယ်လိုရှောင်ရမလဲ။ ရုံးမှာဖျားနာတာကိုဘယ်လိုရှောင်ရမလဲ။ ဤဆောင်းပါးသည် https://sosoir.lesoir.be/comment-eviter-de-tomber-malade-au-bureau တွင်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
အိန္ဒိယ - ISIS ပူးပေါင်းကြံစည်မှုကိစ္စ - နီနာသည် Karnataka ရှိနေရာ ၂၀ ကို ၀ င်ရောက်စီးနင်း၊ TN | …
နယူးဒေလီ။ ။ အမျိုးသားစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအေဂျင်စီ (NIA) သည် Karnataka နှင့် Tamil Nadu ရှိနေရာ ၂၀ ကျော်ကို ၀ င်ရောက်စီးနင်းခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးဝင်ရောက်စီးနင်း ISIS ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဖြစ်ပွားမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ထွက်သယ်ဆောင်နေကြသည်။ အသေးစိတ်များမှာ…
အိန္ဒိယ - အတန်း ၄ ကျောင်းသားသည်ဒုတိယအကြိမ်စာသားကိုသူ့မိခင်ဘာသာစကားဖြင့်ဖတ်ရှုခြင်းဖြစ်သည်
https://static.toiimg.com00:32Voici comment un élève de classe IV lit un texte de classe II dans sa langue maternelleIl yaplus d'enfants qui vont à l'école qu'auparavant, mais la plupart sont incapables d'égaliser…
ဘယ်လ်ဂျီယံ - Coronavirus - ဘယ်လ်ဂျီယံကအကဲဖြတ်ပြီးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ
Coronavirus: ဘယ်လ်ဂျီယံကအကဲဖြတ်၊ အဆင်သင့် Coronavirus - ဘယ်လ်ဂျီယမ်အကဲဖြတ်နှင့်အဆင်သင့်ရပ်တည်မှုအီတလီနိုင်ငံတွင်ပိုမိုဆိုးရွားလာသည့်အခြေအနေတွင်အာဏာပိုင်များအနေဖြင့်လာရောက်ခြင်းကိုတားဆီးရန်အတွက်မည်သည့်နည်းလမ်းသစ်ကိုမှမလုပ်ဆောင်ရသေးပါ။...
အိန္ဒိယ - အိန္ဒိယနှင့် BJP အကြားတိုက်ပွဲဖြစ် အိန္ဒိယသတင်း
CHENNAI - ကွန်ဂရက်အကြီးအကဲ P Chidambaram ကတနင်္ဂနွေနေ့ကနိုင်ငံသားအက်ဥပဒေပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာစင်တာ (CAA) ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဒါဟာအင်ဒီးယန်းတွေနဲ့ BJP အကြားစစ်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားလိုက်သည်။ "ဒါက ... မဟုတ်ဘူး
မော်ရိုကို - မော်ရိုကိုသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့၏အစီရင်ခံစာကိုပယ်ချဆဲဖြစ်သည်
MENA ဒေသရှိနိုင်ငံ ၁၉ နိုင်ငံသို့နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာပါအကြောင်းအရာများကိုသတိပြုမိသောမော်ရိုကိုအစိုးရ၏အဆိုအရ "လူ့အခွင့်အရေးမြှင့်တင်မှုအတွက်မော်ရိုကိုနိုင်ငံ၏ကြိုးပမ်းမှုများကိုလျစ်လျူရှုထားသည်" ဤသည်မှာအာဏာပိုင်များ၏တုန့်ပြန်မှုပင်ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သော 1234... 390 လာမယ့်